Remarks given by Dr. Myint Htwe Union Minister for Health and Sports at the National Leprosy Conference MICC II Nay Pyi Taw, 12th December 2018
ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာကို ရှင်းလင်းတင်ပြပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ရွှေ့လျားဓါတ်ခွဲယာဉ် (Mobile Laboratory Van) များအား တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနများသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Speech delivered by Dr Myint Htwe, Union Minister for Health and Sports, at the opening ceremony of “ South East Asian Amateur Golf Team Championship 2018 (58th Putra Cup)”
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရေချိုခရုမှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော သံပြားကောင်ရောဂါ၏ လက်ရှိဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေအား ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် မြို့နယ်/တိုက်နယ် ဆရာဝန်များသို့ Mobile Tablet များ ဖြန့်ဝေခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
(၁၉) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်များညီလာခံနှင့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ဦးစီးကော်မတီဥက္ကဌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ ရှင်းလင်းတင်ပြချက်
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတကာ အားကစားပြိုင်ပွဲများမှ ဆုတံဆိပ်ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သော အားကစားအဖွဲ့ချုပ်များနှင့် အားကစားသမားများအား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
တိုက်ကွမ်ဒိုအားကစားရုံသစ် ဖွင့်လှစ်ခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
(၂၀၁၈)ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားနှင့် အိပ်ချ်အိုင်ဗွီ၊ တီဘီရောဂါဆိုင်ရာ ပညာပေးလှုံ့ဆော်မှု အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံ အာဟာရဖွံ့ဖြိုးမှုမြှင့်တင်ရေး အမျိုးသားအဆင့် ဦးဆောင်ကော်မတီ ပထမအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
နိုင်ငံတကာ ဘိလိယက်နှင့် စနူကာ အဖွဲ့ချုပ်၏ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Speech delivered by Dr Myint Htwe, Union Minister for Health and Sports, at the opening ceremony of “27th Prepared Foodstuff Product Working Group Meeting and its Related Events” and “13th ASEAN Food Testing Laboratory Committee Meeting”
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် မြို့နယ်/တိုက်နယ် ဆရာဝန်များသို့ Mobile Tablet များ ဖြန့်ဝေခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဆေးတက္ကသိုလ်များတွင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီမျှော်မှန်းရလဒ် အခြေခံသော စုစည်းချိတ်ဆက် သင်ကြားခြင်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပေါ်ပေါက်လာရေး ဆောင်ရွက်နေမှု ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
တီဘီရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို မပျက်မကွက် သတင်းပေးပို့တိုင်ကြားခြင်းဆိုင်ရာ စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အသိပေးရှင်းလင်းတင်ပြပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း
ကမ္ဘာ့ပဋိဇီဝဆေးယဉ်ပါးမှုဆိုင်ရာ အသိပေးရက်သတ္တပတ် (၂၀၁၈) အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကမ္ဘာ့ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင် - ၁၀၀၀)၊ ဆီးချိုရောဂါပညာပေးကုသဌာနှင့် အထူးကုပြင်ပလူနာဌာန (၂) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် မြို့နယ်/တိုက်နယ် ဆရာဝန်များသို့ Mobile Tablet များ ဖြန့်ဝေခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
အာဆီယံ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ (ဓာတ်ခွဲ) တက္ကသိုလ်/ကျောင်းများအသင်း၏ (၄)ကြိမ်မြောက်ညီလာခံ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Opening Remarks by Dr Myint Htwe, Union Minister for Health and Sports 17th Asian Spinal Cord Network Congress in conjunction with 15th Myanmar Rehabilitation Medicine Conference
သူနာပြုသင်တန်းကျောင်း၊ နေပြည်တော်၏ ပထမအကြိမ် သူနာပြု သားဖွား ဒီပလိုမာအောင်လက်မှတ် အပ်နှင်းပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
(၂၀၁၇) ခုနှစ် အမျိုးသားတီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်း နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်းဆန်းစစ်ဆွေးနွေးပွဲ၊ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်သင်တန်း ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် Training of Trainers သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် မြို့နယ်/တိုက်နယ် ဆရာဝန်များသို့ Mobile Tablet များ ဖြန့်ဝေခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
အီလက်ထရောနစ် ကျန်းမာရေးစနစ် တည်ဆောက်မှု ကျောရိုးနောက်ခံပုံစံ ပေါ်ပေါက်လာရေး စုပေါင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Opening Speech by Dr Myint Htwe, Union Minister for Health and Sports and Chair of the M-HSCC at Global Fund South East Asia Constituency Meeting (Yangon, 30-10-2018)
သားဖွား ဒီပလိုမာသင်တန်း သင်ရိုးညွှန်တမ်းနှင့် လက်စွဲစာအုပ်စာတန်းများ မိတ်ဆက်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်အတွက် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေချထားရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် မြို့နယ်/တိုက်နယ် ဆရာဝန်များသို့ Mobile Tablet များ ဖြန့်ဝေခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများဆိုင်ရာ စီမံချက်မန်နေဂျာများ နှင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး(ပထမအကြိမ်)တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁)၊ ဒုတိယနှစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာ့အားကစားလောက ယခုထက်ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မြင့်မားရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအားကစားအဖွဲ့ချုပ်များနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားခဲ့သည့် နိဂုံးချုပ်အမှာစကား
မြန်မာ့အားကစားလောက ယခုထက်ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အားကစားအဖွဲ့ချုပ်များနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသည့်အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားသည့် အဖွင့်မိန့်ခွန်း
(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းဝယ်ယူနိုင်ရေး ရန်ပုံငွေခွဲဝေလျာထားမှုအတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကွမ်းယာနှင့် ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် မီဒီယာမှတဆင့် လူထုလှုံ့ဆော်လှုပ်ရှားပွဲ စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ရေရရှိရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး - ခုတင် (၁၀ဝ၀)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် နှလုံးသွေးကြောပိုက်ထည့် စမ်းသပ်ကုသခန်း (Cardiac Catheterization Laboratory) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဆေးတက္ကသိုလ်နှင့် ဆေးနှီးနွယ်တက္ကသိုလ်များမှ ဆရာ၊ ဆရာမများအားဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော စားသောက်ကုန်များဆီသို့ ဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကမ္ဘာ့ကင်ဆာညီလာခံတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Mahatma Gandhi International Sanitation Convention တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေ ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း
တိုင်းရင်းဆေးကဏ္ဍ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာအကြံပေးအဖွဲ့နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကမ္ဘာ့နှလုံးကျန်းမာရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
အမျိုးသားအဆင့် ဘက်စုံ ကျောင်းကျန်းမာရေး မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၂) အသိပေးမိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ Website နှင့် Social Media များတွင် ပြည်သူများအားအသိပေးတင်ပြသည့် သတင်းရေးသားဖော်ပြခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
လိုအပ်ချက်များကို သိရှိဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် နှင့်လုပ်ငန်းများ အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် တက္ကသိုလ်များဆေးရုံ (ရန်ကုန်)မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောခွဲစိတ်ကုပညာရှင်များ ညီလာခံ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီး၊ (၆) ထပ် တိုးချဲ့ဆောင်သစ် (Cardiac Complex) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက် မူဝါဒရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
သားဆက်ခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်စာအုပ် ဖြန့်ဝေခြင်းအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအားသိရှိနိုင်ရန်နှင့် လိုအပ်သည်များသိရှိဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (မန္တလေး)တွင်ကျင်းပသောတွေ့ဆုံပွဲ၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
အထက်မြန်မာပြည်ရှိ တက္ကသိုလ်များနှင့် ဆေးရုံများရှိ သုတေသနလုပ်ငန်းများ အားဖြည့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
သူနာပြုတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး နှစ် (၂၀)ပြည့်အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
''ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားဆေးတစ်ပါး'' (Exercise is Medicine) Healthy Myanmar အားကစားလှုပ်ရှားမှုတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
(၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာအထိ) အရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန်ခွဲမှုသင်တန်း (၄/၂၀၁၈) တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံ သူနာပြုနှင့်သားဖွားကောင်စီ ပထမအကြိမ် စုံညီအစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (၈-၉-၂၀၁၈)
ရေချိုခရုမှတစ်ဆင့်ကူးစက်သော သန်ပြားကောင်ရောဂါ (Schistosomiasis) ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်းတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက်များ တင်ပြသည့်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (၃၁-၈-၂၀၁၈)
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာ လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံချက်ဆိုင်ရာ မြန်မာ-ဂျပန် ပထမအကြိမ် ပူးတွဲညှိနှိုင်းမှုအစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ပြည်သူလူထုအခြေပြု ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆေးခန်း (Community Health Clinic) လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (၃၁-၈-၂၀၁၈)
အဆိပ်သင့်ခြင်းဆိုင်ရာကုသမှု (Management of Common Poisoning in Myanmar) ဆရာဖြစ်သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (၂၅-၈-၂၀၁၈)
မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေး (Myanmar- Thailand Bilateral Health Ministerial Meeting) တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
(၁၃)ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသတွင်းနိုင်ငံများ သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ညီလာခံ (13th International Dental Collaboration of the Mekong River Region) တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း(၁/၂၀၁၈) တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
(၁၃) ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (Myanmar Health Sector Coordination Committee, M-HSCC) အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Management of Cardiac Emergencies, High Risk Management and Proper Referral ဆရာဖြစ်သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင်နှစ် ဗဟိုအဆင့် ကျောင်းကျန်းမာရေး သီတင်းပတ် အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်)
Opening Remarks given by Dr. Myint Htwe, Union Minister for Health and Sports at the Opening Ceremony of the 24th Asian Junior and Cadet Table Tennis Championships 2018, Wunna Theikdi Sporting complex, Nay Pyi Taw, Myanmar
သတင်းအချက်အလက်ကို အခြေခံ၍ မူဝါဒများချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ အသိပေးတင်ပြခြင်းအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဆေးရုံများ၌ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်နိုင်ရေး တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် - မန္တလေး)
Health Manpower Database, MoHS Mail Server နှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများသို့ ဖြန့်ဝေမည့် Mobile Tablet များတွင် အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကိုရီးယားနိုင်ငံ Chung-Ang University နှင့် ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် ထိရောက်စွာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အသွင်ယူလေ့ကျင့်ခန်းများ (Tabletop Exercises) ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (English Version)
မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသော (၂၀၁၈) ခုနှစ် အာရှကလပ် အမျိုးသားဘော်လီဘောပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လျက်ရှိသော ဒေသများတွင် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ယခုထက်ပိုမို အရှိန်အဟုန်မြှင့် အားဖြည့် ဆောင်ရွက်ရေး အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျန်းမာရေးသံတမန်များ ခန့်အပ်ပွဲ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစံပြုအချက်အလက်များ စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲနှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ထူးချွန်သားသမီးများအား ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း အကြိမ် (၈၀) မြောက် ဗဟိုကောင်စီအစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ပထမအကြိမ် ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှု ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ (၉) လ သင်တန်းစတင်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ရေချိုခရုမှတဆင့်ကူးစက်သော ကပ်ပါးပိုးကြောင့် Schistosomiasis ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ အထောက်အပံ့ဖြင့် ရန်ကုန် နှလုံးရောဂါနှင့် ဦးနှောက်အာရုံကြောရောဂါ အထူးကုဆေးရုံသစ်ကြီး တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်း အသိပေးမိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား တွင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေး မှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နှီးနွယ်တက္ကသိုလ်များမှ ပါမောက္ခချုပ်များနှင့် ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန်သင်တန်းဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ သင်ကြားရေးကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး (ရန်ကုန်)၊ အဆင့်မြင့် (၅)ထပ်ဆောင်သစ်ကြီး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Draft talking points of the Union Minister for Health and Sports “ToT course on Capacity Building for Management of Cardiac Emergencies”, YGH Training Center: 17 July 2018
United Kingdom နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားကျန်းမာရေးစနစ် (NHS) တည်ထောင်မှု နှစ် (၇၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြောက်ဥက္ကလာပ အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး အဆင့်မြှင့်တင်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရန် အဆိုပြုတင်ပြသည့်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
တိုးချဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီမံချက်ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲခြင်းနှင့် အခြားစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (Inter- agency Coordinating Committee-ICC) ၏ တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဗဟိုသားဖွားသင်တန်းကျောင်း (ရန်ကုန်)ရှိ သင်တန်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာနနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရေး စီမံကိန်းများအတွက် အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာစာလွှာ (Exchange Letter) လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
စီမံခန့်ခွဲမှုအထောက်အကူပြု ကျန်းမာရေး သတင်းစနစ်တွင် အသုံးပြုနေသောပုံစံ များနှင့် လက်စွဲစာအုပ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဗဟိုအဖွဲ့ (၃/၂၀၁၈) အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Myanmar National Conference on Tobacco Control and Prevention of Non- Communicable Diseases (NCDs) ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကုသရေးနှင့် သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
(၂၀၁၇) ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး အားကစားသမားဆုများချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
သက်ကြီးဝါရင့် အားကစားကလောင်ရှင်ကြီးများအား ဂါရဝပြုကန်တော့ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
စတုတ္တ အကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယောဂနေ့ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
လူဦးရေအခြေပြု ကင်ဆာရောဂါ စာရင်းကောက်ယူခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ အရေးပေါ်လူနာများကုသခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်းဆေးခန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ရန်ကုန်မြို့၊ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမှ ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
၂၀၁၈ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့သွေးလှူရှင်များနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှရရှိသောရန်ပုံငွေနှင့် biennial work plan တွင်ပါရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ ကျောင်းကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ (Retreat) တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
(၆) ကြိမ်မြောက် အာရှနှင့်ပစိဖိတ် လူဦးရေဆိုင်ရာ ကာလလယ် သုံးသပ်မှုညီလာခံသို့ ပေးပို့မည့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားအဆင့်အစီရင်ခံစာ ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆရာဝန်များ၏အရည်အသွေး စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဖွင့်လှစ်သည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာဒီပလိုမာ သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (ရန်ကုန်)
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ အားကစားနှင့်ပညာရေး ပေါင်းစပ်သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (ရန်ကုန်)
ကမ္ဘာ့ဆေးလိပ်မသောက်ရေးနေ့ (၂၀၁၈) အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (နေပြည်တော်)
တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Dr Myint Htwe, Union Minister for Health and Sports, Myanmar, at the Ministerial Event on “Towards Universal Coverage with HIV Prevention Services and Commodities – the Global Prevention Coalition and Roadmap ”, 71st World Health Assembly, 21-26 May 2018, Geneva, Switzerland
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
နိုင်ငံသားတိုင်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လွှမ်းခြုံမှုအားကောင်းစေရန် Mobile Medical Team ဖြင့် ကျေးရွာများသို့ အလှည့်ကျကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (နေပြည်တော်)
မြေငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (နေပြည်တော်)
အောင်ပွဲရ မြန်မာ့ရိုးရာလှေအသင်းအား ဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Zifam Pyrex Myanmar Co., Ltd. ၏ Beta Lactam ဆေးဝါးစက်ရုံသစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သားဖွားဆရာမများနေ့နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသူနာပြုများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (သူနာပြုတက္ကသိုလ်-ရန်ကုန်)
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရရှိသော ရန်ပုံငွေများကို ပြည်သူများအတွက် ယခုထက်ပိုမို အကျိုးရှိထိရောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၊ (၂၈) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (နေပြည်တော်)
မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်း သောက်သုံးမှုထိန်းချုပ်ရေး မဟာဗျူဟာ (FCTC 2030: Myanmar Strategy) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (နေပြည်တော်)
(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း လျာထားမှု ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
အဓိကဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများစာရင်း ရွေးချယ်သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ငလျင်ဘေး အပါအဝင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပွားသည့်အခါ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးအပ်နိုင်ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
One Health Systems Mapping and Analysis Resource Toolkit (OH-SMART ™) Training Workshop တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (နေပြည်တော်)
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်သို့ သွားရောက်၍ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
“Social Determinants and Health Equity” presented by Dr. Myint Htwe, Union Minister for Health and Sports, Myanmar in “Cuba SALUD 2018 – III Convención Internacional de Salud Pública” “International Convention on Public Health”
Global Ministerial Summit on Patient Safety, 2018 ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့)
ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး၏ အကြိမ် (၅၀) မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အောင်ပွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မိုးကုတ်မြို့၊ ကျပ်ပြင်ပြည်သူ့ဆေးရုံသစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဗဟိုအဆင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
လုပ်ငန်းခွင်မဝင်မီ သားဖွားဆရာမ အတတ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးမည့် နည်းပြဆရာများအတွက် လက်တွေ့ အသုံးချလက်စွဲစာအုပ်အား အသိပေးဖြန့်ဖြူးခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေး ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး၏ (၁၃) ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၈) တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး သုံးလပတ် လုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြန်လည်သန်စွမ်းရေး နည်းဗျူဟာနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်သဘောတူညီမှုနှင့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာ့အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ပထဝီအနေအထားတည်နေရာဆိုင်ရာ ဂြိုလ်တုအခြေပြု အချက်အလက်များကို ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် တိုးချဲ့ကာကွယ် ဆေးထိုးလုပ်ငန်း အနုစိတ်စီမံချက်များ ရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် တင်ပြသော အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစံပြုအချက်အလက်များ (Standardized Health Messages) စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ၊ စံပြဆေးရုံများ ဆုချီးမြှင့်ပွဲနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ကျန်းမာရေး သံတမန် ခန့်အပ်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း၊ ဆေးရုံအုပ်ချုပ်မှုပညာအဖွဲ့ (ဒွါဒဿမအကြိမ်) နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာကျောက်ကပ်ဖောင်ဒေးရှင်း တည်ထောင်မှုအောင်မြင်ခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဆေးရုံသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကွန်ပျုတာစနစ်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအား အကာအကွယ်ပေးရေး ပထမအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကျောင်းကျန်းမာရေး ဗဟိုကော်မတီ (၁/၂၀၁၈) အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Interagency Coordination Committee (ICC) (၁/၂၀၁၈) အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Talking Points for INGOs by Dr. Myint Htwe, Union Minister for Health and Sports
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစား လှုပ်ရှားမှုအထိမ်းအမှတ် ဝတ္ထုတို၊ ဆောင်းပါး၊ ဓာတ်ပုံ ပြိုင်ပွဲဆုရရှိသူများနှင့် အတက်ကြွဆုံး လှုပ်ရှားပါဝင်ခဲ့သည့်ဒေသများအား ဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
USAID HIV/AIDS Flagship (UHF) Project စီမံချက် စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကာကွယ်ရေးနှင့်လူမှုဆေးပညာအဖွဲ့၏ နှစ်ပတ်လည်နှင့် အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်တုံ့ပြန်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
(၁၃) ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း ညီလာခံတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးနှင့် အသည်းရောဂါဆိုင်ရာ အာဆီယံနိုင်ငံများ ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
သူနာပြုတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်၏ (၂၄) ကြိမ် မြောက်ဘွဲ့နှင်းသဘင် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)၊ (၂၃) ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားသို့ ပေးပို့သည့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ သဝဏ်လွှာ
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း(၆၄)ကြိမ်မြောက် ဆရာဝန်များညီလာခံတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
46th Myanmar Health Research Congress Opening remarks by Dr Myint Htwe Union Minister for Health and Sports The Republic of the Union of Myanmar (8-12 January 2018)
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ဝန်ထမ်းများအားလုံးသို့ (၂၀၁၈) ခုနှစ်အတွက် နှစ်သစ်ကူးနှုတ်ခွန်းဆက်လွှာနှင့် နှစ်သစ်တွင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များပေးပို့ခြင်း
Talking Points of Dr. Myint Htwe, Union Minister for Health and Sports at the 9th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub Regional Countries
ဘဏ္ဍာငွေဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း၊ ငွေစာရင်းပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်း၊ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု၊ ဝယ်ယူရေးနှင့် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Opening remarks by Dr.Myint Htwe, Union Minister for Health and Sports in 3rd Myanmar Nephro-Urological Society Conference (Key Points)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်ဆိုင်ရာ အခြေခံနှစ် ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်ဆိုင်ရာ အသိပညာမြှင့်တင်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Healthy Myanmar Seminar ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပေးပို့သောအမှာစကား
Union Minister for Health and Sports to the distinguished participants, keynote speakers attending the 16th ASEAN Paediatric Federation Congress, held in Novotel Hotel, Yangon.
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ “ကွမ်းယာနှင့်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် မီဒီယာမှတစ်ဆင့် လူထုလှုံ့ဆော်ပွဲ စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား” ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၁)ရက် သို့ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
Opening remarks by Dr.Myint Htwe, Union Minister for Health and Sports in 6th Haematological Conference (Key Points)
(၆) ကြိမ်မြောက် သွေးရောဂါပညာဆိုင်ရာညီလာခံတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းတို့ရဲ့ ရာသီတုပ်ကွေး H1N1 pdm09 ရောဂါအကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲ၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း (မူကြမ်း) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရာသီတုပ်ကွေး H1N1 pdm09 ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံရသည့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ အားကစားမှူးများနှင့် တွေ့ဆုံလမ်းညွှန်မှာကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ မိန့်ခွန်း
Union Minister's Speech in Family Planning Summit - London, UK 11 July 2017
အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင်းနိုင်ငံများ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များ ပြည့်မီစေရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Rotary Club of Yangon မှ ကျင်းပပြုလုပ်သော Officers Installation Ceremony (2017-2018) တွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ Guest of Honor အဖြစ်တက်ရောက်၍ ပြောကြားသည့် Keynote Speech
တိုင်းရင်းဆေးပညာကဏ္ဍဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းဆေး ပညာရပ်ဆိုင်ရာအကြံပေးအဖွဲ့ပထမအကြိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး (ရန်ကုန်) နှစ်(၁၂၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကမ္ဘာ့ငှက်ဖျားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့နှင့် အာဆီယံသွေးလွန်တုပ်ကွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မိသားစုစီမံကိန်းအတွက် အရေပြားအောက်သို့ထိုးနိုင်သည့် သန္ဓေတားဆေး မိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်း ဆန်းစစ်ဆွေးနွေးပွဲ (၂၀၁၆) အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မန္တလေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၏ Training & Conference Centre ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
အမျိုးသားအဆင့် ခုခံကျ/ကာလသားရောဂါတားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် တိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက် နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်းဆန်းစစ်ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
စတုတ္ထအကြိမ် ဘွဲ့လွန်ဆေးပညာသင်ကြားရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
သူနာပြုတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) ၌ကျင်းပသော မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင် အဖွဲ့ဝင်သစ်များအား ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုခြင်း အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီမှ ကျင်းပသည့် Medical Practitioners’ Relationship with Industry Seminar အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
အသည်းရောင်အသားဝါ (စီ) ရောဂါကုသမှု စတင်ခြင်း Pilot Program အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုသွက်လက်မြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ တာဝန်ရှိသူများအား ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ(တောင်ကြီး)တွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်အမှာစကား
မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းပွဲနှင့် နှစ်ပါတ်လည် အစည်းအဝေး အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
၂၀၁၇ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဆေးလိပ်မသောက်ရေးနေ့ အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့် အဖွင့်မိန့်ခွန်း (မူကြမ်း) (၃၁-၅-၂၀၁၇)
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ပထမ (၆) လပါတ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်နှင့် မောင်တောမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိ ဗဟိုအဆင့်ဆေးရုံကြီးများမှ ဆေးရုံအုပ်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ကုသရေး လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အလွတ်သဘောလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မွေးဖွားမှုနှင့် သေဆုံးမှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစာရင်းဇယားများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၇) (Draft)
ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ တိုက်နယ်ဆရာဝန်မွမ်းမံသင်တန်း (၁/၂၀၁၇) သင်တန်းဆင်းပွဲနှင့် ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (Draft)
ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
တစ်သက်တာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သောဘဝနေထိုင်မှုပုံစံဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များရှိ ဆေးရုံ(၉၈)ရုံတွင် ဆေးရုံအခြေပြု ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဗဟိုအဆင့်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
External Assessment for Joint External Evaluation (JEE) in Myanmar ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးအားကစားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသမီး အားကစားအဖွဲ့ဆပ်ကော်မတီတို့မှ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးအားကစားသမားများအား ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
တိုင်းရင်းဆေးဝါးများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊ သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (မူကြမ်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ နန့်ခုတ်စံပြ ကျေးရွာတွင်ကျင်းပသော 3MDG ရန်ပုံငွေဖြင့် UNOPS မှတည်ဆောက်သော ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန(၂)ခုနှင့် ဌာနခွဲ(၁၅)ခုအား ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းမှ တည်ဆောက်လှူဒါန်းသော ဘော်ဆိုင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံသစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဟန်ချက်ညီ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ အမြဲမပြတ် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁) စတင်ဆောင်ရွက်မှု အသိပေးခြင်းအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး မှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း ကောက်နုတ်ချက်များ
အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁) စတင်ဆောင်ရွက်မှု အသိပေးခြင်းအခမ်းအနားတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း ကောက်နုတ်ချက်များ
ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်း နှစ် (၆၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း (၇၈) ကြိမ်မြောက် ဗဟိုကောင်စီ အစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
(၂၀၁၇) ခုနှစ် ထူးချွန်အခြေခံ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနှင့် ထူးချွန် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျန်းမာရေးလုပ်သားများ လေ့လာရေးခရီးစဉ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း ဆေးရုံအုပ်ချုပ်မှုပညာအဖွဲ့၏ ဆေးရုံစီမံခန့်ခွဲမှုပညာသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Statement by the Union Minister of Health and Sports, Myanmar. “Ministerial Meeting Towards Ending TB in the South-East Asia Region”, 15-16 March 2017, Le Meridien Hotel, New Delhi.
ဒုတိယအကြိမ်မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသနိုင်ငံများ၏ငှက်ဖျားရောဂါကင်းစင်ရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
မွေးကင်းစအလေးအထူးကြပ်မတ်တိုးချဲ့ကုသဆောင် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
(၁၂)ကြိမ်မြောက် သားဖွားမီးယပ်ပညာညီလာခံတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
အရှေ့တောင်အာရှဒေသနိုင်ငံများ နာကျင်မှုဝေဒနာကုသရေးညီလာခံတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
အမျိုးသားဘောလုံးအကယ်ဒမီ(ရန်ကုန်) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း (တောင်ကြီး) (၁၇)ကြိမ်မြောက် ဆရာဝန်ညီလာခံဖွင့်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း
မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သင်ယူရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုစင်တာ (Learning and Performance Improvement Center) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
တောင်ကြီးမြို့ ဇီဝလုံခြုံမှုအဆင့်(၃) တီဘီ ဓါတ်မှန်ဌာန (BSL-3 TB Laboratory) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)ရန်ကုန် နှစ်(၉၀)ပြည့် နဝရတ်ရတုအထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
အသက်(၇၀)နှစ်အထက် သက်ကြီးဝါရင့် အားကစားကလောင်ရှင်ကြီးများအား ဂါရဝပြုကန်တော့ပွဲနှင့် အကောင်းဆုံးအားကစားသမားဆုများ ချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
ဆေးရုံစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် တီဘီ၊ အိပ်ချ်အိုင်ဗွီနှင့် ငှက်ဖျားရောဂါနှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် အထူးဝန်ထမ်းသဘောတူညီချက် စည်းကမ်းများနှင့် အညီတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသောဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
သူနာပြုတက္ကသိုလ်-မန္တလေး နှင်းဆီဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
(၆၃)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်ညီလာခံတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကာကွယ်ဆေးလွှမ်းခြုံမှုနည်းပါးသော နေရာများတွင် လွှမ်းခြုံမှုမြင့်မားစေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဦးစီးဌာနအသီးသီးတွင် တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီ၊ အသင်းအဖွဲ့များမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့်တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ တင်ဒါအောင်မြင်သောကုမ္ပဏီများနှင့်တွေ့ဆုံပွဲတွင်ပြောကြားသည့်အချက်များ
အားကစားအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌများ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအားကစားအဖွဲ့ချုပ်များ တွေ့ဆုံပွဲ၌ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Opening Remarks by Dr. Myint Htwe, Union Minister for Health and Sports at the 45th Myanmar Health Research Congress
ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများမှ ဦးစီးအရာရှိများနှင့်တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံကြီး(ရန်ကုန်) ကျောက်ကပ်သွေးသန့်စင်ကုဌာနဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမြွတ်ကြားသည့် အဖွင့်မိန့်ခွန်း
လူငယ်မူဝါဒ ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ ဗဟိုကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီ၊ မူကြမ်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့တို့၏ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
(၂၀၁၆)ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက် ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ (ဗဟိုအဆင့်) အခမ်းအနားကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ခုနှစ်၊ နှစ်ပတ်လည်မျက်နှာစုံညီအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမြွတ်ကြားသည့် အဖွင့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ (၂၀၁၅-၂၀၁၆)ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကျင်းပ
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ဖွင့်လှစ်သည့် အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ (အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃)၊ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး မြွတ်ကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ကျင်းပသော Seminar on the significance of health for development in Myanmar ၌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမြွတ်ကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၊ (၇၇)ကြိမ်မြောက် ဗဟိုကောင်စီအစည်အဝေးနှင့် ဒွါဒဿမအကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီ ညီလာခံတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမြွတ်ကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကမ္ဘာ့မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရေး ရက်သတ္တပတ်နှင့် အာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေး ရက်သတ္တပတ်များ ဗဟိုအဆင့် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား (၂၀၁၆) တွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၌ (၃-၈-၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၅-၈-၂၀၁၆) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမြွတ်ကြားသည့် အပိတ်မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၌ (၃-၈-၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၅-၈-၂၀၁၆) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမြွတ်ကြားသည့် အဖွင့်မိန့်ခွန်း
မွေးဖွားမှုနှင့် သေဆုံးမှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစာရင်းဇယားများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှပြောကြားသည့် အဖွင့်မိန့်ခွန်း
ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်တွင် ကာကွယ်ဆေးအသစ် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါပိုးကာကွယ်ဆေး (PCV) ထည့်သွင်းထိုးနှံခြင်း ဗဟိုအဆင့်အသိပေးဆွေးနွေးပွဲတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး မြွက်ကြားသည့်မိန့်ခွန်း
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၄) ရက်နေ့ ကမ္ဘာ့သွေးလှူရှင်များနေ့အခမ်းအနားတွင်ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ကျန်းမာရေးနှင့်အားစားဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းများသို့ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (၁-၄-၂၀၁၆)